काठमाडौं आउँदै गरेको माल बा’हक ट्र’क त्रि’शुली न’दीमा खस्यो ! – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /News/काठमाडौं आउँदै गरेको माल बा’हक ट्र’क त्रि’शुली न’दीमा खस्यो !
काठमाडौं आउँदै गरेको माल बा’हक ट्र’क त्रि’शुली न’दीमा खस्यो !
धादिङ । पृथ्वी राजमार्ग अन्तरगत धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकास्थित चरौँदी ज्यामिरे घाटबाट मंगलबार त्रिशुलीमा एकजना सवारी चालक बेपत्ता भएका छन्।
वीरगञ्जबाट काठमाडौं आउँदै गरेको ना ३ ख ८०७४ नम्वरको ट्रक मंगलबार विहान त्रिशुली नदीमा खसेको इलाका प्रहरी कार्यालय गजुरीले जनाएको छ। ट्रकमा सवार चालक बाहेक अरु को को थिए भन्ने यकिन नभएको र ट्रकको खोजी कार्य जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ।
नदीको बहाव निकै ठूलो भएकोले ट्रक नदीले बगाएर बेपत्ता भएको अनुमान प्रहरीको छ । बेपत्ता हुने सवारी चालकको पहिचान खुल्न सकेको छैन ।
वीरगन्जबाट काठमाडौंका लागि छुटेका कपडा लोड गरिएको तीन वटा ट्रकमध्ये एउटा ट्रक सम्पर्कमा नआएपछि गरिएको खोजी कार्यमा दुर्घटनामा परेको पुष्टि भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरिक्षक महेन्द्र खड्काले जानकारी दिनुभयो ।
बुटवल : लुम्बिनी प्रदेशमा यो वर्ष हालसम्म करिब ४६ प्रतिशत रोपाई सकिएको छ। प्रदेशभरी धान खेती हुने कुल ३ लाख ३४ हजार ६७५ हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये १ लाख ५३ हजार ३ दशमलव ५ हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपाई सकिएको हो।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार प्रदेशमा ४५ दशमलव ७ प्रतिशत रोपाई सकिएको हो। असार ११ गतेसम्मको हो तथ्याङ्क अनुसार गत वर्षको तुलनामा रोपाई कम भएको छ। यस अवधिमा गत वर्ष ४८ दशमलव २ प्रतिशत रोपाई सकिएको थियो।
लुम्बिनीको रोल्पामा यो वर्ष सबैभन्दा बढी ९० प्रतिशत रोपाई सकिएको छ। जिल्लामा धान खेती हुने ४ हजार ८९० हेक्टर क्षत्रफल मध्ये ४ हजार ४०१ हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपाई सकिएको छ। यसैगरी प्युठानमा ८० प्रतिशत रोपाई सकिएको छ। धान खेती हुने ६ हजार २ सय हेक्टर क्षेत्रफल मध्ये ४ हजार ९ सय ६० हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपाई सकिएको छ। बर्दिया र रुकुम पुर्वमा ६३ प्रतिशत रोपाई सकिएको छ।
मन्त्रालयको असार ११ गतेसम्मको तथ्याङ्क अनुसार गुल्मीमा सबैभन्दा कम ७ प्रतिशत रोपाई भएको छ। धान खेती हुने कुल १० हजार २४६ हेक्टर क्षेत्रफल मध्ये ८३९ हेक्टरमा मात्रै रोपाई सकिएको हो। लुम्बिनी प्रदेशको सबैभन्दा बढी धान खेती हुने कपिलवस्तुमा यो वर्ष २४ दशमलव ९ प्रतिशत मात्रै रोपाई सकिएको छ। यो तथ्याङ्क गत वर्षको तुलनामा २ दशमलव ८ प्रतिशतले कमी हो।
श्रीमती सहित अमेरिकामा बस्दै आएका डाक्टर रोशनको यसरि भयो मृत्यु
गाउँमा श्रीमती बि’रामी, काठमाडौंमा आँशु बगाउँदै लक्ष्मीप्रसाद भन्छन – ‘बेलुकीदेखि केही खाएको छैन’